Umlando - I-FME World Tour Barcelona - Geofumadas
Umlando - I-FME World Tour Barcelona
NgoJuni, 2019 Geospatial - GIS, Innovations
Sisanda kuhambela umcimbi we-FME World Tour 2019, oholwa nguCon Terra. Lesi senzakalo sasiqhutshelwa ezindaweni ezintathu eSpain (eBilbao, Barcelona naseMadrid), sabonisa intuthuko ehlinzekwa yi-software ye-FME, isihloko sayo esikhulu Game of Izinguquko nge FME.
Ngalolu hambo, abamele iCon Terra ne-FME, bakhombise ukuthi ukukhula kwabo kubhekwe kanjani kuzidingo nezicelo zabasebenzisi zomkhiqizo ngamunye wabo, njenge-FME Desktop, i-FME Server, ne-FME Cloud. Ngaphezu kwalokho, kwethulwe izikhungo zombuso nezizimele ezikhombisa izindaba zazo zempumelelo, zigcina ubudlelwano neCon-Terra nokusetshenziswa njalo kwe-FME.
Isiqalo sathoma ngomdlalo ukuphuza iqhwa nababekhona, besebenzisa ifoni ephathekayo, uchungechunge lwemibuzo ehlobene nabaguquli be-FME baphenduliwe, futhi imiklomelo yanikezwa kulabo abasabela ngokufanele futhi ngokushesha. Khona-ke, ukuboniswa kwezibuyekezo zesikhombimsebenzisi kubonakala.
Sasikwenza umcimbi e-Bilbao, Barcelona futhi manje Madrid, thina baye bakujabulela ukuboniswa isibalo sabantu ababeza iqhaza umcimbi ngoba ngokuvamile labo abeza abasebenzisi abafuna ukufunda mayelana ezintsha okuletha FME nendlela ukusebenzisa amaphrojekthi akho Siyajabula kakhulu ngokuthola lokho esikutholile. " Laura Giuffrida - Nge-terra GmbH
Kubonakala kunesifiso sokuthi isofthiwe engakwazi ukwenza izinqubo ezinciphisa umthwalo wamathuluzi amaningi aqukethe uhlelo lwe-GIS, ingakaqashelwa okwamanje - ikakhulukazi eNingizimu Melika - lapho inani labasebenzisi lingasebenzi khona, uma kuqhathaniswa namazwe amaningana kusuka eYurophu naseNyakatho Melika (United States noma eCanada). I-FME Desktop Software, yaziwa kakhulu ngokuba ne-interface esibonakalayo namathuluzi enikeza ulwazi olukhulu lomsebenzisi.
Ukunikeza umqondo uya, siqale ethi asekelana icubungula izinhlobo eziningi idatha nezakhiwo kusukela umumo (.shp), CAD (.dxf, .dwg), nezakhiwo ze-non-Spatial ezifana yolwazi, noma idatha ukumodeliswa 3D njenge-BIM. Ngakho-ke, okwenza i-FME, ingahlanza zonke izinhlobo zamaphutha noma izimo ukuthi uma uzifaka kwi-GIS zingakha izinkinga ezinkulu. Esinye sezibonelo ezicacile kakhulu - futhi siyazi ukuthi abaningi abahlaziyi be-GIS baye bahamba ngalokhu - yiziphambeko ze-topology, i-FME ihlanza zonke izinhlobo zamaphutha ukuze uma uzifaka ku-ArcGIS noma kwenye i-GIS, i-PC ayiwi phansi ngezixwayiso.
Ngaphezu kokuhlanza, i-FME ingashintsha isimo semininingwane, kanye nesinye sezinto eziqukethwe ku-rename ngayinye yefayela, engeza, susa izimfanelo, amasimu. Lokhu ngenhla kungenzeka, ngokusetshenziswa kwezinguquko ezingaphezu kwe-450, eyenzelwe isidingo ngasinye, esingalinganiswa nabanye abasebenzisi ngeHhovisi le-FME., Izingxenye ezintsha ezifana namaphakheji namaphrojekthi nazo zaxoxwa ngazo.
Lo mbukiso wagcizelela ukufakwa kochungechunge lwamathuluzi nokusebenza, ngokwesibonelo, abaguqulwayo abahlotshaniswa nokucubungula ama-raster kwanezelwa kwisofthiwe, njenge: I-RasterObjectDetector, i-RasterObjectDetectorTrainer, ne-NaturalLanguageProcessor, futhi futhi izinguquko ezintsha zigxile ekufundeni komshini.
Inzuzo ye-FME ukuthi isekela ukungena nokuphathwa kwezinhlobo eziningi zemininingwane, futhi ngalokhu ungaxazulula zonke izinhlobo zezimo ezihlobene nazo. Laura Giuffrida - Nge-terra GmbH
Ukuze abasebenzisi zamanje kanye yangaphambili FME, khumbula ephephile ukuthi isofthiwe kwase kuhlanganiswe umsebenzi decompression Nokho, kule nguqulo entsha ungakwazi ukwengeza idatha onomfutho futhi isistimu ukufunda FIKE yokukhipha ukuba desktop, into ewusizo kakhulu, ngoba akubona bonke ukwamukela izicelo kanye zomlando software, okuyinto uhumusha isikhathi ukonga imisebenzi.
I-FME akuyona ithuluzi lokuboniswa kwedatha, isofthiwe esemuva ngemuva kwe-GIS noma ezinye izinhlelo, amandla ayo asekucubunguleni, ukuhlanza idatha ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwezinguquko. Okokugcina, ngemva kokwenza okudingekayo, uyayibhala kabusha ngendlela oyidingayo. Laura Giuffrida - Nge-terra GmbH
Abaningi ababekhona ezenzakalweni ezihlobene ne-FME, yilabo abanesikhathi sokusebenzisa isofthiwe ye-FME njengomphambili wezinhlelo zabo (izinkampani noma ohulumeni), kokubili endaweni kanye nasezweni. Lo nyaka, usizo luye lwaba lula kakhulu, kwakusobala ukuthi kwakukhona abantu ekamelweni abangakaze balisebenzise isicelo futhi bawazi izinzuzo zalo, kanye ne-Con Terra ne-FME.
Ukubamba ababekhona, baqala ukukhombisa zonke izibuyekezo zamathuluzi abo nokufakwa kwamasha. Iqala nge-interface, kungenzeka ukushintsha kwimodi emnyama, enye yezimfuneko ezenziwe abasebenzisi, futhi ukuthuthukiswa kumachasiselo, imibala ngokuya kwedatha, amafasitela angalungiswa ukuze afane nomsebenzisi.
Wakhuluma ifomethi ingezwe DICOM (izithombe imishini ezisebusweni umzimba womuntu), TopoJSON (nge ubudlelwano topological), WCS, isizinda kanye ukufunda kumadivayisi GPS (Garmin POI), ukufinyelela ku-API Socrata futhi nezixhumi omusha ayingxenye Hub FME, njengoba AzureBlobStorageConnector, S3Connector noma CityworksConnector.
I-FME ifunda futhi ibhala amafayela e-ESRI i3s
Ngokufanayo, thina engeza umsebenzi ezihlobene Raster Multitemporal izifundo lapho zithombe zibekwe -arrastrándolas ifolda umthombo nokuthi uhlelo wenza scan okubonisa ezihlukile, odala opopayi ukuqeda nazo zonke izithombe ezikhethiwe. Enye abuyekezwe ngempumelelo kakhulu lihlobene I-ChangeDetector -ngaphambili UkubuyekezaDetector-, esetshenziselwa ukunquma izinguquko phakathi kokuqoqwa kwedatha eyodwa nolunye, manje kungenzeka ukuthi kunqunywe amapheshana okubekezelela idatha. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukudala amanani angaguquki ukuze umsebenzisi, odinga izikhathi eziningi eziguquguqukayo, akudingeki enze yonke inqubo kusukela ekuqaleni, ukubeka imingcele ngesikhathi ngasinye.
Izigigaba awazange ezihlobene kuphela FME Desktop, kodwa futhi nezinye izici eziningana ezinjengolwazi FME Server, lapho izakhi ezifana wanezela: ungene ukuphathwa amathokheni zokuhlunga iphrojekthi, ukudluliswa uqagula FME Leseva FME Hub, unezela yezimiso zokuphepha kwephasiwedi, nezintandokazi zokucushwa komsebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, baxoxa mayelana nokuthuthukisa lamathuluzi kulindelwe kakhulu, EsriReprojector, elalikade edingekayo umsebenzisi unelayisensi ESRI-ArcGIS manje lokhu kuvuselelwa akasebenzisi ArcObjects noma zidinga ezingaphezu kuka ilayisensi FME.
Uma sikhuluma ngezindaba eziphumelele ezethuliwe, kwakukhona izikhungo eziningana ezazihlangene ukukhombisa izinzuzo zokusetshenziswa kwe-FME, ngamaphrojekthi afana Ukushicilelwa nokusatshalaliswa kwe-Topographic Cartographic of the City of Barcelona ye-Institut Municipal d'Informàtica Ajuntament de Barcelona, ​​i-Nexus Geographics nayo ibikhona ikhombisa ukuthi bazisebenzisa kanjani izinsizakalo zokulanda ezinamandla kanye nokuzenzekelayo kokuphathwa kwemethadatha ku-IDE kusetshenziswa i-FME Server .
Siyaqiniseka ukuthi bayabuza, uma i-FME idinga ukuthengwa kwelayisensi, noma kunjalo, abanye abahlaziyi kanye nabasebenzisi baye bagcizelela ukuthi ukuwuthola akusho imali enkulu, kodwa ukutshalwa kwezimali isikhathi eside, kuzo zonke izinzuzo ezimele ukukhiqiza imiklamo yazo zonke izinhlobo nakuzo zonke izinhlobo zezindawo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nemikhiqizo ye-Safe Software, abathuthukisi be-FME, kufanele uhambe kuphela kwiwebhusayithi yabo, noma blog lapho umphakathi uveza ukukhathazeka kwawo, uphendule indlela izinqubo ezenziwa ngayo, kanye nencazelo yazo zonke izinguquko kanye namathuluzi.
Thumela Previous«Langaphambilini Yini okusha in Geo-engineering - AutoDesk, Bentley and Esri
Post Next I-Kanbanflow - uhlelo lokusebenza oluhle lokulawula imisebenzi elindileOkulandelayo »
Thola amandla we-Hec-RAS ne-Hec-GeoRAS ukuthola amamodeli wesiteshi nokuhlaziywa kwezikhukhula #hecras Le mfundo esebenzayo ...
Revit MEP Course - Ukufaka i-HVAC Mechanical
Kulesi sifundo sizogxila ekusetshenzisweni kwamathuluzi e-Revit asisizayo ekwenzeni ...
I-Flood Modeling Course - I-HEC-RAS kusuka ekuqaleni
Amasu nokuhlaziywa kwezikhukhula nge-software yamahhala: I-HEC-RAS HEC-RAS uhlelo lwe-Army Corps of Onjiniyela ...